प्रत्यारोपण गरेको १२ वर्षपछि मिर्गौलामा खराबी, उपचारका लागि प्रधानमन्त्री सिंगापुर प्रस्थान
प्रत्यारोपण गरेको १२ वर्षपछि मिर्गौलामा खराबी, उपचारका लागि प्रधानमन्त्री सिंगापुर प्रस्थान
काठमाडौं - शरीरमा एन्टिबडीको मात्रा बढी देखिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थप परीक्षणका गर्न बिहीबार अपराह्न सिंगापुरतर्फ गएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सिंगापुरस्थित नेसनल युनिभर्सिटी अस्पतालमा मिर्गौलाको कार्यक्षमता र औषधिको प्रभाव सम्बन्धमा परीक्षण हुनेछ ।
निजी चिकित्सक डा. शर्माका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सेवन गरिरहेको औषधिको प्रभाव र मिर्गौलाको अवस्थाबारे सूक्ष्म परीक्षण हुनेछ । उनले भने, ‘मिर्गौलाको थप परीक्षण र उपचारका क्रममा देखिने प्रभावको सूक्ष्म अध्ययन विज्ञहरूले गर्नेछन् ।’
सिंगापुरमा रहँदा शरीरले निष्कासन गरेका विभिन्न एन्टिबडीको जाँच गरिनेछ । नयाँ प्रविधि भएको र उपचारमा पनि नाम कमाएका कारण सिंगापुर जानुपरेको डा. शर्माले बताए ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदासमेत गुपचुप राखिएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले आपत्ति जनाएका छन् । राजधानीमा बिहीबार आयोजित साक्षात्कारमा उनले भने, ‘राष्ट्रको ढुकुटी खर्च गरी उपचार गराएपछि सबै जानकारी दिनुपर्छ । जनतालाई ढाँट्दा प्रश्न उठ्छ ।’
गोप्य राखिएको प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यबारे निजी चिकित्सक डा. शाहले सिंगापुर प्रस्थान गर्नुअघि मात्र जानकारी गराएकी थिइन् । सिंगापुरमा रहँदा प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा नयाँ र उल्लेखनीय जानकारी प्राप्त भए मिडियामार्फत सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।